लालमण्डलेशाही मानिँदैन !
डा. गाेपाल ठाकुर आइतबार, पुस २७, २०७६ मा प्रकाशित
हिजो मलाई एउटा फोन आयो । फोन उठाउँदा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट खबर गरिएको थाहा भयो । खबर थियो आज बिहानै पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा शोभा यात्रामा सहभागी हुनको लागि निम्तो । मैले त खबर दिनुहुने कर्मचारीलाई यति मात्रै भनेँ, ‘म त्यस आयोजनको पक्षधर होइन, त्यसैले त्यस कार्यक्रममा मेरो उपस्थिति रहन्न ।’
आज बिहानै जङ्गी अड्डामा नेपाली सेनाले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी पृथ्वी जयन्ती मनाएको तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालका राष्ट्रपतिले पृथ्वी जयन्तीको आजको दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवस भन्दै शुभकामना दिएका समाचारहरू विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा सम्प्रेषण भएको पाइयो । केही कलमजीवीहरूले पनि यसको पक्षमा कलम चलाएको पनि दृष्टिगोचर भयो ।
पृथ्वी जयन्ती वा अरू कुनै दिन जनताको तह र तप्कामा सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा मनाइनु जनताको अधिकारको कुरो हो । यो वर्तमान संविधान अनुसार पनि जनताको मौलिक हकभित्र पर्दछ । तर राज्यको अखण्डताको रक्षार्थ देशको सेना महिमा मण्डनको साथ यस्ता पश्चगामी उत्सवहरूमा सामेल हुनु असंवैधानिक र गैरकानूनी ठहर्छ । गणतन्त्रको सर्वोच्च संरक्षक राष्ट्रपतिले यस अवसरमा शुभकामना दिनु गणतन्त्रको उपहास ठहर्छ र राज्यकै सर्वोच्च प्राज्ञिक संस्था नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले उर्दी जारी गरेर यसलाई त्यस बेलामा उत्सवको रूपमा मनाउँछ जुन बेलामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सङ्घीय सरकार छ, गणतन्त्र प्रतिको उपहास ठहर्छ ।
आज पनि पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तार अभियानलाई नेपाल एकीकरण भनेर स्थापित गर्न निरर्थक कोशिस गरिँदैछ । किनभने हजारौँ टुक्रामा रहेको भारतलाई ईष्ट इण्डिया कम्पनीमार्फत बेलायती साम्राज्यको हिस्सा बनाइएको हो । तर अहिले पनि तीन टुक्रामा रहेको तत्कालीन भूभागमध्ये न भारत, न पाकिस्तान, न बङ्लादेशले बेलायती साम्राज्यलाई एकीकरण कर्ता भनेको पाइन्छ । तुलनात्मक रूपले शाही शासकहरूभन्दा बेलायती शासकहरूले आफ्नो साम्राज्यभरि यातायात, उद्योग-कलकारखाना, शिक्षा आदिको जग हालेर एउटा उन्नत अवस्थामा पुर्यारउने प्रयास गरेका थिए । तर दुई सय अड्तीस वर्षीय शाही शासनले के चाहीं एउटै घतलाग्दो काम गर्योप, त्यसको लेखाजोखा गर्ने बहसमा म भाग लिन तयार छु ।
रह्यो एउटा देश दिने कुरो, त्यो त्यस बेलाको तत्कालीन परिस्थितिको माग थियो । पृथ्वीनारायण अघि सरे, केही हदसम्म गरे । नसरेको भए कोही अरू सर्थे वा बेलायती साम्राज्यले लिन्थ्यो । कुनै अरू नै नाम हुन्थ्यो । केही फरक स्वरूप हुन्थ्यो । केही फरक गाथाहरू बन्थे । अर्को कुरो पृथ्वीनारायणले नेपाल दिएनन् उनले पनि हामीमाथि थोपरेको गोरखा साम्राज्य नै हो । उदाहरणको रूपमा आजका मितिसम्म हामीसँग गोरखापत्र छ, नेपाली सेना मनोवैज्ञानिक रूपमा गोर्खाली सेना नै छ र नेपालका फौजीहरू रहेका विदेशी सेनाका टुकडीहरू गोरखा रेजिमेण्ट नै छन् । त्यति मात्रै होइन राजा महेन्द्रसम्मका सरकारी कागजातहरूले नेपालको प्रशासनिक सीमाङ्कन गर्दा गोर्खा राज्यको नेपाल, पहाड (पूर्व-पश्चिम) र मधेश भन्ने भूभागहरू रहेको देखिन्छ ।
मानवीय रूपमा गोर्खाली भनाउँदाहरू नै अव्वल कहलिन्छन् तर ‘नेपाली’ भनाउँदाहरू अहिलेसम्म दलितको नारकीय जीवन बाँच्तै छन् । आज पनि गोर्खालीभन्दा बेगल राष्ट्रियताहरूलाई नेपाली नमान्ने मनोविज्ञानको अन्त भइसकेको छैन । तसर्थ यो गोरखा साम्राज्य हो । जहाँसम्म देशको अखण्डताको लागि बेलायती साम्राज्यसँग लडेको कुरो छ, १८१६ को सुगौली सन्धि हारेको अवस्थामा अंग्रेजहरूले गोर्खा साम्राज्यमाथि थोपरेको हो र १८६० को सन्धि बेलायती साम्राज्य विरोधी सैन्य विद्रोह दबाएर अंग्रेजहरूको ताबेदारी गरेवापत बेलायती साम्राज्यले दान-बकसको रूपमा गरेको हो ।
स्वतन्त्र भारतले पनि १९५० को शान्ति-मैत्री शाह-राणा शासकहरूमाथि थोपरेको हो भन्ने शिक्षा हाम्रा राजनीतिक गुरुहरूले दिँदै आएका छन् । त्यस सन्धिले भारतसँग नेपालको सीमा निर्धारित गरेका १८१६ र १८६० लगायत बेलायती साम्राज्यसँग नेपालले गरेका सबै सन्धिहरूलाई खारेज गरेको छ तर १९५० देखि २००८ सम्म पृथ्वीनारायणका सन्तान शासकहरूले भारतसँग सीमा सम्बन्धी न कुनै नयाँ सन्धि गरेको छ, न त कुनै औपचारिक नक्शा नै संयुक्त रूपमा पारित गरेको भेटिन्छ । अहिले कालापानी, लिम्पिया धुरा र लिपुलेक केही समयदेखि चर्चामा छन् । पृथ्वीनारायण पछि सबैभन्दा राष्ट्रवादी कहलिएका राजा महेन्द्रकै पालामा भएको १९६२ को भारत-चीन युद्धको क्रममा भारतले नेपाली भूभाग कालापानीमा आफ्नो फौज राखेको हो । देशमा लोकतन्त्रलाई धुलो-पीठो बनाउनको लागि राजा महेन्द्र र तिनका उत्तराधिकारीहरू पनि यस विषयमा मौन रहेको तथ्य उजागर भइरहेको छ ।
निश्चित रूपमा जुन अवस्थामा पृथ्वीनारायणले गोरखा राज्यको विस्तार गरे, अन्य कसैले पनि त्यस बेला त्यही गर्थे । सही कुरो हो, तर आफ्नो साम्राज्यलाई कुन तिरकाले अगाडि बढाए त्यो कुरो प्रमुख हो । पृथ्वीनारायणले त्यसै बेला आफ्नो सेनामा निश्चित जातिका जवानहरू मात्रै सामेल हुने निर्देश दिव्योपदेशमा गरेका छन् ।
दक्षिण तिरका साहु-महाजनहरूलाई राजधानी प्रवेश निषेध गर्ने निर्देश गरेका छन् । तिनका वंशजहरूले त झन् अर्को जहानिया शासन यो देशलाई थोपरे । तिनकै वंशज त्रिभुवनले एकातिर राणाशासनको विरुद्ध बिगुल फुक्नय भने र अर्कोतिर धर्मभक्त, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री र गङ्गालाललाई मृत्युदण्ड दिने फैसला पनि सदर गरे । तैपनि जुन नेपाली जनताले राणाशाहीलाई समाप्त पारे, तिनै जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई तिनका छोरा राजा महेन्द्रले सैनिक कू गराएर २०१७ सालमा कुल्चिन पुगे ।
आज एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल बनाउन नेपाल सरकारले खोज्दा अदालतको शरणमा गएर केही प्रतिगामीहरूले रोक्नेि कुचेष्टा गर्दैछन् । यदि सरकारको यो काम अपराध हो भने राजा महेन्द्रले सघन जङ्गल फँडानी गराई निर्जन ठाउँमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनाए । यसबाट चुरे-मधेश क्षेत्रमा उत्पन्न भरुभूमीकरणले निम्त्याएको मानव अस्तित्व विरोधी समस्याका लागि कुन अपराध अन्तर्गत कुन अदालतमा मुद्दा चलाउने । १२३ भाषा र १२५ जाति भएको नेपालमा एउटा भाषा र एउटा जातिलाई मात्रै नेपालीको दर्जा दिने अपराधको लागि पनि पृथ्वीनारायण जिम्मेवार नै ठहरिन्छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि जनताका विभिन्न तह-तप्काले आ-आफ्नै किसिमका चाडपर्व, उत्सव मनाउने अधिकार राख्दछन् । त्यसैले पृथ्वी जयन्ती वा यस्ता समारोह जनताको तहमा कहीँ मनाइन्छ भने राज्य तिनको पछि लाग्नु हुन्न यद्यपि पञ्चायती राजशाहीले शहीदहरूकै जयन्ती पनि मनाउन नदिएको, नेकपाका संस्थापक पुष्पलालकै लाश पनि नेपाल ल्याउन नदिएको, राजाकै गुणगान पनि भोजपुरीमा किन गाएको भनी पं. दीपनारायण मिश्रलाई हिरासतमा थुनेको जस्ता अक्षम्य अपराधहरू हामी भुलिसकेका अझै छैनौं ।
यति हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालका राष्ट्रपतिले यस्ता अवसरमा शुभकामना दिन्छन्, नेपाली सेनाले समारोह आयोजन गर्छ, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले कलश-यात्रालगयायत महिमा-मण्डनका कार्यक्रमहरूको आयोजन गर्छन् भने यो संविधान र कानूनको उल्लङ्घन तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जे-जति सङ्घर्षहरू अहिलेसम्म भएका छन् ती सबै सङ्घर्षहरूको अपमान हो र यस्तो अवस्थालाई लालमण्डलेशाही बाहेक अरू केही पनि भन्न सकिन्न । साथै साँच्चिकै मण्डले शाही शासनलाई त स्वीकार गरिएन भने यो लालमण्डलेशाही पनि मानिँदैन ।